Kedu ihe OEM / ODM pụtara n'ichepụta uwe?
site ha na 20-11-16
OEM na ODM bụ ụzọ abụọ nke akwa akwa. Eleghị anya ị hụla ha n'ọtụtụ ebe. Ma gịnị ka ha pụtara kpọmkwem? Ka anyị chọpụta. 1.OEM - Original Equipment Manufacturer An mbụ ngwá emeputa na uwe a maara dị ka na-acha ọcha labelụ uwe emeputa ma ọ bụ dị ka priv ...
Ihe na-ekpo ọkụ n'oge oyi na Lotte Garments
Akara Uwe a na-ahaziri Hoodies Nkịtị nkasi obi hoodie nwere akpa akpa kangaroo 2 * 2 ọgịrịga elastane na akwa na ukwu. 65% polyester / 35% owu lepụrụ ajị anụ ajị anụ 250g Egwuregwu agba agba biri gburugburu drastring omenala imewe roba biri ebi logo ...
Ghọta Differentdị Fmụaka Dị Iche Iche
Kpụrụ Ngwurugwu Ya mere, gịnị bụ akwa ajị anụ? A na-eji ajị anụ ajị anụ, wee ma ọ dịkarịa ala otu akụkụ na-ehichapụ iji mepụta eriri ma mepụta ụra (elu elu) maka mmetụta dị nro, nke gbakwunyere. Maka akwa ajị ajị ajị anụ na ọsụsọ, n'ozuzu n'ime uwe m ...